निषेधाज्ञामा नरोकिएका सिर्जनशील हातहरु (फोटोफिचर) - RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal
Home प्रमुख निषेधाज्ञामा नरोकिएका सिर्जनशील हातहरु (फोटोफिचर)
निषेधाज्ञामा नरोकिएका सिर्जनशील हातहरु (फोटोफिचर)
काठमाडौं । काठमाडौंमा निषेधाज्ञा सुरु भएको आज चार दिन पुरा भयो । कलकारखाना ठप्प छ । अत्यावश्यक भनिएका खाद्यान्ह र औषधी दोकानदारले समेत पसल खोल्ने समय घटाएका छन् । सडकमा मान्छेको चहल–पहल ठप्प प्राय छ ।
ललितपुरको वालकुमारी स्थित ढुङगाको मूर्ति कारखानाको स्थिती भने केही फरक थियो कालिगढहरु मूर्तिको डिजाइन गर्न र आकार निकाल्न व्यस्त थिए । आफ्नो काममा निषेधाज्ञाले असर नगरेको उनीहरुको भनाई छ ।
दिन भरी मूर्ति कुँदन व्यस्त हुने उनीहरुलाई कोरना संक्रमणको खासै चिन्ता देखिदैन । वेलुका नजिकै वनाएको क्याम्पमा वस्छन् भने भोली पल्ट विहानै देखि काममा जुट्ने गरेका छन् । अचेल उनीहरु आफ्नो घर जाँदैनन् । विषेश सावधानी अपनाएर काम गदाए कोरोना संक्रमणको खतरा नरहेको उनीहरुको भनाई छ ।
यो पनि पढ्नुहोस बीर अस्पताल अगाडीको ढलपोखरीले महानगरको इज्जत जाँदैन ? (फोटोफिचर)
काठमाडौं । अभिनेत्री केकी अधिकारी यतिबेला आफूले निर्माण गर्ने नयाँ चलचित्रको तयारीमा व्यस्त छिन् । उनले यसअघि विशाल भण्डारीको निर्देशनमा चलचित्र ‘कोहलपुर एक्सप्रेस’ निर्माण...
Editor-Picks सुजीतकुमार झा - November 25, 2020
जनकपुरधाम । जनकपुरधामको ऐतिहासिक दूधमति नदीनालामा परिणत भएको छ । सो नदीको कायापलट गर्न प्रदेश २ को सरकार अग्रसर भएको छ । सो नदीको...
खेल राजधानी समाचारदाता - November 28, 2020
काठमाडौं । नेपाल ओलम्पिक कमिटीको आयोजनामा तेस्रो राष्ट्रिय स्पोर्टस फोरम आइतबार हुने भएको छ । कार्यक्रम जुमको माध्यमबाट ‘भुर्चअल’ हुनेछ । संस्कृति, पर्यटन तथा...
इंग्ल्यान्डको जित, फ्रान्स रोकियो
लन्डन । यूईएफए नेसन्स लिगको तेस्रो राउन्डको खेलमा फिफा वरीयताको शीर्षस्थानमा रहेको बेल्जियम इंग्ल्यान्डसँग पराजित भएको छ । घरेलु मैदानमा इंग्ल्यान्डले बेल्जियममाथि २–१ को...
टेनिस रोका - September 25, 2020
काठमाडौं । विगत केही दिनदेखिको लगातारको भारी वर्षासँगै आएको बाढी र पहिरोका कारण देशभरको सडकमा क्षति पुगेको छ । बाढी र पहिरोका कारण देशभर...
प्रधानमन्त्री ओलीले पारिश्रमिक नलिने
Breaking News सुभाष साह - April 14, 2020
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पारिश्रमिक नलिने घोषणा गरेका छन् । ‘कोभिड–१९, प्रधानमन्त्री राहत कोष’मा उनले आफ्नो पारिश्रमिक जम्मा गर्ने...
यसरी सफल भएको थियो प्रम ओलीको दोस्रोपटक मिर्गौला प्रत्यारोपण
प्रमुख प्रशान्त वली - March 5, 2020
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दोस्रोपटक गरिएको मिर्गौला प्रत्यारोपण सफल भएको छ । त्रिवि शिक्षण अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रेमकृष्ण खड्काका अनुसार प्रधानमन्त्रीको...
शिशुको हत्या गर्ने जोडी कारागार चलान
प्रदेश युवराज विष्ट - March 16, 2020
भोजपुर, ३ चैत्र । जिल्ला अदालत भोजपुरले अवैध सम्बन्धपछि बच्चा जन्माएर फाल्ने महिला सहित पुरुषलाई पूपक्र्षका लागि कारागार चलान गरेको छ ।
अदालतले भोजपुरको हतुवागढी...
भर्खरै राजधानी समाचारदाता - August 2, 2020
Breaking News राजधानी समाचारदाता - November 25, 2020
काठमाडौं । महोत्तरीको बर्दिबासमा हिजो प्रहरीको गोली लागेर घाइते भएका सञ्जय न्यौपानेको मृत्यु भएको छ । बर्दिबास नगरापालिका–१ घर भएका ४२ वर्षीय न्यौपानेको उपचारका...
इन्जिनियरिङ कलेजका पूर्वअध्यक्ष न्यौपाने पक्राउ